Maalinta: Noofambar 11, 2017
Degmada Sakarya Sapanca ee la qorsheeyay in laga sameeyo mashruuca gawaarida gawaarida fiilada waxaa ansixiyay baarlamaanka. Xubnaha Golaha ayaa si wada jir ah u oggolaaday shirkadda dowladda hoose ee SAPAŞ iyo duqa inay bilaabaan shaqada. Degmada SAPAŞ Noofembar waa caadi [More ...]
Meelaha Saldhigyada iyo Goobaha Goobidda ayaa lagu go'aamiyey mashruuca Akçaabat Cable Car
Mobilka loo yaqaan "Trabzon", Akçaabat ee kumeelgaadhka ah-ku wareejinta-wareejinta ayaa la qorsheeyay in lagu sameeyo iyada oo la raacayo meelaha laga dhisayo xarun-tareenka wadada iyo meelaha laga baxo, waxaa la qaban doonaa qandaraaska. Mashruuca xarig-jarka wuxuu lahaan doonaa seddex saldhig oo wejigiisa qaabilaaddooda la dhammaystiray. Laga bilaabo xarunta Republic Park [More ...]
TCDD waxay sheegtay inay shaqaaleysiinayso shaqaalaha. Sida ku xusan ogeysiiska, shaqaalaha TCDD 1 iyo shaqaalihii hore ee dambi ku xukumi jiray Elazığ ayaa heli doona. Waa tan faahfaahinta. TCDD 10 Sida ku xusan ogeysiiska bisha November ee 2017, dambiilayaashii hore ee jirku ku dhexjiro jirka [More ...]
Mashruuca Sapanca Ropeway ayaa la ansixiyay: degmada Sakarya Sapanca oo la qorsheeyay in lagu sameeyo mashruuca xadhka-qaadista waxaa ansixiyay baarlamaanka. Xubnaha Golaha ayaa si wada jir ah u oggolaaday shirkadda dowladda hoose ee SAPAŞ iyo duqa inay bilaabaan shaqada. [More ...]
Saraakiisha IETT waxay la kulmeen madaxdii Basaksehir. Saraakiisha İETT waxay la kulmeen madaxdii degmada Başakşehir waxaana martigaliyay Dowlada Başakşehir. Gudoomiye kuxigeenka kulanka halkaas oo loogahadlay arimaha gaadiidka ee degmada. [More ...]
Saldhig Sayniska ah ee Heerarka Yurub ee Ankara
Gürsel Baran, Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga ee Ankara (ATO), ayaa booqday Xarunta Ankara ee Saadka iyo kormeer. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in Saldhiga Ankara ee Saadka uu yahay mashruuc lagu daydo, ayuu yiri Baran, “Ankara ayaa bixin doonta xaruntan casriga ah. [More ...]
IMM oo ku wajahan Eyup tareen iyo tartan cusub
Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul Mevlüt Uysal wuxuu baarey maalgashiga socda ee Eyüpsultan iyo dhismaha Eminönü-Eyüp - Alibeyköy Tram Line. Munaasabadda, Duqa magaalada Eyüp Sultan Remzi Aydın, Xoghayaha Guud ee IM Hayri [More ...]
Baabuurta Guriga Caruurta ee İzmir
Duqa magaalada Izmir Aziz Kocaoglu, warshadaha Izmir iyo ganacsiga iyo gawaarida iyo sahayda warshadaha wakiilashada bakteeriyada ayaa si wada jir ah u wada marti qaadaya iyagoo ugu yeeraya kulan wada jir ah. Xildhibaanada Izmir ee la socda baarlamaanka [More ...]
Tareenka jidka tareenada Ataturk, 79. Annagu sanadguuradii Dhimashada
Railwaymen, aasaasihii oo ka mid ah Republic of Turkey, Mustafa Kemal Ataturk, enthusiast tareenka, 79 dhimashada. Munaasabadda xafladda ayaa lagu qabtay hoolka shirarka TCDD. Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, Maareeyaha Guud ee Gaadiidka TCDD Inc. [More ...]
Apaydin: Ataturk wuxuu bilowday dhismaha waddanka wadada tareenka
Mustafa Kemal Ataturk, oo ah aasaasihii Jamhuuriyaddeenna, ayaa lagu xusay xafladdii lagu qabtay Shirwaynaha TCDD ee kudhowaad 79 ee uu geeriyooday. Maareeyaha Guud ee TCDD İsa ApaydınVeysel Kurt, Maareeyaha Guud ee TCDD [More ...]
Maanta taariikhda: 11 November 2010 Seyrantepe Taariikhda